Calculator ကို Fittings
Calculator ကို fittings 1
armature Calculator ကို 2
Calculator ကို Fittings 2
, အင်အားဖြည့်စုစုပေါင်းအရှည်ကိုတွက်ချက်သည်၎င်း၏အတိုင်းအတာများနှင့်အင်အားဖြည့်အရက်ဆိုင်, တစ်မီတာ၏အလေးချိန်နှင့်တစ်ကြိမ်လုံးအရေအတွက်။
အဆိုပါတွက်ချက်မှုတစ်ကုဗမီတာသံမဏိ 7850 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်အပေါ်အခြေခံသည်။
အိမ်သူအိမ်သားဆောက်လုပ်ရေးအတွက် armature ၏တွက်ချက်မှု
ထိုအိမ်၏ဆောက်လုပ်ရေးစဉ်အတွင်းမှန်ကန်စွာအခြေခံအုတ်မြစ်ဘို့အင်အားဖြည့်ပမာဏကိုတွက်ချက်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်တို့သည်ငါတို့၏အစီအစဉ်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ထိုဂဏန်းတွက်စက်အဆို့ရှင်ကိုသုံးပြီးသင်အင်အားဖြည့်, ဒါမှမဟုတ်ချောင်း၏လိုအပ်သောအရေအတွက်နှင့်၎င်းတို့၏ခြုံငုံအရှည်လိုအပ်ပါတယ်စုစုပေါင်းအလေးချိန်ကိုသိရန်ကြိမ်လုံး၏အလေးချိန်နှင့်အရှည်ကို သိ. စေနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဒေတာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသင့်ရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်အင်အားဖြည့်ပမာဏကိုတွက်ချက်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
အမြစ်အမျိုးမျိုးများအတွက် fittings ၏တွက်ချက်မှု
ထိုအင်အားဖြည့်တွက်ချက်ဖို့လည်းအိမ်နှင့်မြေအောက်ခန်းအမျိုးအစားကိုသိသင့်ပါသည်။ ဤတွင်နှစ်ဦးဘုံမျိုးကွဲရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါနှင့်ချွတ်အမြစ်။
လှူမြေဆီလွှာများအပေါ်ကြီးမားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကွန်ကရစ်ပြားနှင့်အတူအုတ်၏လေးလံသောကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်အိမျတျောကို install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤကိစ္စတွင်အခြေခံအုတ်မြစ်အားဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာအချင်းချင်း perpendicular ချောင်းတွေနှစ်ယောက်အလွှာပါဝင်ပါသည်အသီးအသီးသောအနှစ်ဦးဇုန်ထဲမှာထားလျက်ရှိ၏။
,5မီတာသောအစိတ်အပိုင်းများ၏အရှည်ပြားများအတွက်အင်အားဖြည့်များ၏တွက်ချက်မှုများကိစ္စတွင်စဉ်းစားပါ။ အားဖြည့်ချောင်းတွေအချင်းချင်းမှ 20 စင်တီမီတာအကွာအဝေးမှာချထားပါသည်။ အကျိုးဆက်တစ်ဘက် 25 အရက်ဆိုင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုပန်းကန်ဘား၏အနားထားကြသည်မဟုတ်မှာ, ထို့နောက်သူက 23 ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်ချောင်းတွေ၏အရအေတှကျကို သိ. , သူတို့ရဲ့အရှည်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာချောင်းတွေဆို့ရှင်အနား 20 စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိမထားသင့်နှင့်ထိုကြောင့်, ထိုပန်းကန်၏အရှည်၏အခြေခံပေါ်မှာစီလှံတံ၏အရှည် 460 စင်တီမီတာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက်ပြုရပါမည်။ Transverse အလွှာ, အပန်းကန်တစ်စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်တူဖွစျလိမျ့မညျရှိကြောင်းထောက်ပံ့။ ငါတို့သည်လည်းနှစ်ဦးစလုံးဇုန်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ် fittings ၏အရေအတွက်ကိုတွက်ချက်ရန်ရှိသည်။
အခါးပတ် 23 စင်တီမီတာအကြားအကွာအဝေးယူဆ။ နှစ်ဦးစင်တီမီတာ fittings mount ထားခဲ့ဖို့ကတည်းကဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သူတို့ကိုအကြားတစ် Jumper, 25 စင်တီမီတာတစ်အရှည်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သူတို့တစ်ဦးချင်းစီအားဖြည့်ခါးပတ်၏လမ်းဆုံမှာဆဲလ်အတွင်းရှိထားကြပါတယ်ကတည်းကဤသို့သော webs, အရေအတွက်၌ဤအမှု 23 လိမ့်မည်။ ဤအဒေတာနဲ့အတူကျနော်တို့အစီအစဉ်ကို အသုံးပြု. တွက်ချက်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။
အလွန်းတည်ငြိမ်သောမဟုတ်မြေ၌ခဲယဉ်းအိမ်စိုက်ထူယူဆဘယ်မှာ strip အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအဆောက်အဦး၏ပတ်လည်အတိုင်းအတာတစ်ဝှမ်းနှင့်အဓိကဝန်-bearing ရိုးကိုအောက်တွင်ကြက်ကကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်ဖြည့်ကွန်ကရစ်လုပ်ထားတဲ့ဟာတိပ်ခွေတစ်ခုအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံအုတ်မြစ်များအင်အားဖြည့်ကိုလည်း2ဇုန်အတွက်ထုတ်လုပ်ပေမယ့်အပေါ်ချွတ်အခြေခံအုတ်မြစ်အားဖြည့်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုမှကျေးဇူးတင်စကားအများကြီးလျော့နည်းနှင့်အကျိုးဆက်ကြောင့်လျော့နည်းကုန်ကျမည်စားသုံးသည်။
စည်းကမ်းများအတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအခြေခံအုတ်မြစ်ဘို့ကဲ့သို့တူညီသောအကြောင်း layout ကို reinforcement ။ သာချောင်းတွေထောင့်ကနေ 30-40 စင်တီမီတာအတွက်အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အသီးအသီး Jumper ကတည်ရှိသည်သောလှံတံသည်အထောက်ခံမှ 2-4 စင်တီမီတာမှာသငျ့သညျ။ တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအမြစ်များအတွက်လိုအပ်သောအားဖြည့်အရှည်၏တွက်ချက်မှု၌ရှိသကဲ့သို့တူညီမူအရအပေါ်ဖျော်ဖြေဒေါင်လိုက် Jumper ၏တွက်ချက်မှု။
နှစ်ဦးစလုံးကိုပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယကိစ္စများတွင်အဆို့ရှင်ကိုအနည်းဆုံး 2-5 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးရဲ့ margin နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရမည်သတိပြုပါ။
ဂဏန်းတွက်စက် သင့်ရဲ့တွက်ချက်မှု ဝင်ပေါက်
main pageဒိုင်မန်းရှင်းရှိသောတံကျင်ကိုGable အိမ်ခေါင်မိုးထိန်းချုပ်ထားသောအိမ်ခေါင်မိုးMansard အိမ်ခေါင်မိုးတင်ပါးအိမ်ခေါင်မိုးသစ်သား trussstring ကိုအပေါ်ဖြောင့်လှေကားတိုက်ရိုက်ကုန်းနှီးလှေကား90°နှင့်အတူလှေကား90°နှင့် rotary အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလှေကား180°လည်ပတ်နှင့်အတူလှေကား180°အားဖြင့်လှည်လှေကားနှင့် rotary အဆင့်ဆင့်သုံးထွာနှင့်အတူလှေကားသုံးထွာနှင့် Rotary အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလှေကားကြောင်လိမ်လှေကားသတ္တုလှေကားတစ်ဦး bowstring အကှေ့အကောကျမြားနှငျ့သတ္တုလှေကား90°နှင့်အတူသတ္တုလှေကား90°နှင့်တစ်ဦး bowstring အကှေ့အကောကျမြားနှငျ့သတ္တုလှေကား180°လည်ပတ်အတူသတ္တုလှေကားသတ္တု 180°အားဖြင့်လှည်လှေကားနှင့်အကှေ့အကောကျ bowstringကွန်ကရစ်လှေကားမြှောင်အခြေခံအုတ်မြစ်ဆိပ်ခံအခြေခံအုတ်မြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုပြားကွန်ကရစ်ကွင်းကိုထူထောင်ရေးအတွက်ပြားမျက်စိကန်းသောဧရိယာထိုထောင့်ဖြတ်၏တွက်ချက်မှုထိုကွန်ကရစ်၏ဖွဲ့စည်းမှုသစ်Fitting များကြွေထည်မြေထည်ကို tilesGypsum plasterboardဝေါလ်ပေပါmounting စာရွက်ပစ္စည်းများသတ္တုကင်သစ်သားအိမ်သူအိမ်Wall ကိုရုပ်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကြမ်းပြင်ကုန်းပတ်ကျောက်ခေတ်ခြံစည်းရိုးmetal ခြံစည်းရိုးpicket ခြံစည်းရိုးအဘို့အ Archကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-level ကြမ်းပြင်Visorsကြံစည်မှုဧရိယာကတုတ်ကျင်းရေတွင်း၏ထုထည်ကိုကတုတ်ကျင်းTurfစတုဂံပုံလေးရေကန်tube Displacementတင့်ကား၏ထုထည်ကိုစည်ထဲမှာ volumeတစ်ဦး Rectangular ကွန်တိန်နာ၏ထုထည်ကိုထိုအမှိုက်ပုံအတွက်သဲသို့မဟုတ်ကျောက်စရစ်၏ပမာဏကိုလေဝင်လေထွက်အတွက်လေထုအသံအတိုးအကျယ်၏တွက်ချက်မှုရေအပူချိန်၏တွက်ချက်မှုဖန်လုံအိမ်အာနိသင်Toeplitz semicircularအဆောက်အဦညှပ်မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်ဗီရိုtrapezoid ၏ထောင့်များကိုဖြတ်ယူပါအပိုင်းတွက်ချက်မှုတွက်ချက်မှုအပိုင်းပရိဘောဂ crosshair ထောင့်ချေးငွေ Calculator ကို
Register သို့မဟုတ်သင့်တွက်ချက်မှုနဲ့ save mail ဖြင့်ပေးပို့နိုင်မည်မယ်လို့နိမိတ်လက္ခဏာ။
ဝင်ပေါက် | မှတ်ပုံတင် | သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား?